ပိုးကြေးပန်းကြေးအနေနဲ့ (၁၈) သိန်းကျော်တန်ဖိနပ် လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး………….
ချစ်စရာကောင်းပြီး သွက်လက်ချက်ချာ ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းမချောလေး နေခြည်ဦးက Beauty Blogger တစ်ဦးအနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါ အောင်မြင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးသူ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ နေခြည်ဦးဟာ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်၊ Influencer တစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ စံပြဖြစ်နေအောင် […]
ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ရာသီခွင် (၄) ခုအ ကြောင်း.
ကံကောင်းခြင်းတွေဆိုတာ တစ်ချို့လူတွေအတွက် မွေးရာပါအားသာချက်တစ်ခုပါ။ ဒါဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေ၊ ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ သူများနဲ့ မတူတဲ့ အားသာချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါပဲ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကံကောင်းခြငးတွေနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ရာသီခွင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (1) SCORPIO (Oct ဒီရာသီဖွားတွေဟာ အရမ်းကို စိတ်စွမ်းအားကြီးမားကြသလို၊ တစ်ခုခုကို လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးလုပ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ […]